छोरी सुष्मिताको आफ्नै ससुरा र नन्दले मारेपछि पहिलोपटक आमा रुँदै मिडियामा – Online Nepal Site
काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले जे गरे…..
त्रिभुवन बिमानस्थल बाट उडेका ति ६० जना नेपालीको कागजपत्र यस्तो पो रहेछ …
सोमवार दिउसो देखि यि स्थानमा भारी वर्षा, काठमाडौको मौसम कस्तो छ ?
बेनीमा १८ वर्षीय अमृतको आँखामा ‘सेतो पुतली झुस’ परेर आँखाको ज्योति नै गुम्यो
वीरगञ्जमा कक्षा ९ र ६ मा अध्ययनरत दुई किशोरको डु’बेर मृत्यु
सङ्खुवासभाको घट्नाले लियो नायाँ मोड, ४ जना पक्राउ
दाङमा पक्राउ परेका यी महिला जस्लाई धनि र राम्रा युवक त देख्न नै हुन्थेंन ..!
फेरी अस्ताए अर्का कलाकार, सुटिङकै क्रममा यसरी भयो निधन
पोखरामा फेरी जमिन भा’स्सीयो, ख’नेर हेर्दा देखीयो यस्तो ! के हुन लाग्यो यस्तो ? हेर्नुहोस भिडियो
जनताले खाइ नखाइ पठाएको पैसाको कस्तो खेलबाड हो यो ? धुर्मुस सुन्तलीले अब हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएन,१६करोड ऋण पनि लाग्यो भनेपछी झन्डै हा,नाहान-भिडियो सहित
मुख्य पृष्ठ /Video/छोरी सुष्मिताको आफ्नै ससुरा र नन्दले मारेपछि पहिलोपटक आमा रुँदै मिडियामा
छोरी सुष्मिताको आफ्नै ससुरा र नन्दले मारेपछि पहिलोपटक आमा रुँदै मिडियामा
926 1 minute read
कपिलवस्तुको वाढगंगा माइती भएकी सुस्मिताको वैशाख महिनामा मात्र धुमधामसंग विवाह भएको थियो । भर्खरै वैवाहिक जिवनको रंगिन संसारमा उनी रमाउदै थिइन् । तर त्यो रमाइलो समय विताएको ६ महिना नपुग्दै सुस्मिताले आफ्नो जिवनसाथी गुमाइन् । श्रीमान वितेको पीडा बोकेर बसेकी सुस्मिताको पनि निधन भइसकेको छ । श्रीमान वितेको ६ महिना नहुँदै उनको पनि निधन भयो । उनको ह त्या भएको बताइएको छ । श्रीमानको निधन पछि माइतमा बसेकी सुस्मितालाई घर परिवारका सदस्यले बोलाएर हेटौंडा गएकी थिइन् । त्यहीं उनको निधन भएको हो । उनको शव कोठाभित्र मृत अवस्थामा फेला परेको थियो ।
आमावुवाले त्यो अवस्था समेत हेर्न सक्ने अवस्थाको थिएन । त्यसैले आमावुवालाई तत्कालको दृष्य देखाइएन । घटना भएपछि पनि घर परिवारका सदस्यले खबर गरेका होइनन् । एक जना छिमेकीले तिम्रो छोरीले देहत्याग गरीन् भनेर फोन गरेका थिए । उनलाई त्यो कुरा विश्वास लागेन । उनले आफ्नो छोरीको शव हेर्छु भन्दा पनि हेर्न दिइएन ।
उनलाई छोरीको ह-त्या भएको आशंका गरेकी थिइन् नभन्दै उनले गरेको शंका नै सहि निस्कियो । बुवाले भने छोरीको शव हेर्ने मौका पाए तर हेर्न सक्ने अवस्थाको थिएन । केही स्थानियले पनि सुस्मिताले देहत्याग गरेको होइन भनेर भनेको वुवाले बताएका छन् । स्थानियको कुरा र छोरीको शवको अवस्था हेर्दा नै वुवालाई ह त्या हो भन्ने निश्चयमा पुगे ।
सुस्मिताको श्रीमानको निधन नहुँदासम्म परिवारले त्यस्तो नराम्रो ब्यवहार भने गर्ने गरेका थिएनन् । तर श्रीमानको निधन भएपछि भने तेरो कारणले मेरो दाईको निधन भयो भनेर भन्ने गरेको बताइन् । ज्वाईको निधन भएपछि परिवारको सदस्यले गरेको ब्यवहार पनि आफुले हेर्न सक्ने अवस्थाको थिएन । श्रीमान वितेर किरियामा बसेकी छोरीलाई भेट्न पनि नदिएको र लगिदिएको कपडा पनि लगाउन नदिएको उनले बताइन् । उनले दुखको बेलामा छोरीसंगै बस्न खोज्दा पनि बस्न नदिएको बताइन् ।
सुस्मिताको परिवारका सदस्यले गरेको त्यस्तो ब्यवहारले दु:खी भएकी उनी अहिले छोरीकै ज्यान गएपछि भने त्यो देहत्याग हो भनेर विश्वास गर्न नसक्ने बताइन् । उनले १३ दिनको काम सकेपछि पनि आफुले माइत ल्याउन नदिएर दुख दिएको बताइन् । उनले आफ्नो छोरीलाई यातना दिनकै लागि माइत आउन नदिएको उनको भनाई छ । ४५ दिन पछि पठाउँछौं भनेर भनेको भएपनि ५३ दिनसम्म पनि माइत नपठाएपछि आफुले बुवालाई छोरी लिन पठाएको बताइन् ।
केयर बाल गृहका बच्चाहरुले भने हामीलाई पुस्पा मम्मानै प्यारो, हामी उँहासंगै बस्न चाहन्छौं (भिडियो)
प्रताप दासको आवाजमा शिशिर भण्डारीको दर्दनाक अभिनय । ‘फोटो फिरिममा’को अफिसियल भिडियो आयो
राजेश हमाल संग धेरै स्टेज संगै पुगेका गायक खुमन अधिकारीले दिए दीपाश्रीलाई मुखभरिको जवाफ,राजेश हमाल संग भोटिङ्ग गरौ !
भक्तपुरमा पहिलो पटक ३ जनाको शव देख्ने देउरानी पहिलो पटक मिडियामा,घरभित्र छिर्दा कोठा-कोठामा ला*स भेटियो (भिडियो हेर्नुस्)
हेर्नुस् यसरी बाघ आउने जङ्गलमा फालेका रहेछन शिशुलाई ,शिशु भेटाउने बा मिडियामा । (हेर्नुहोस भिडियो)
3 seconds अघि
5 mins अघि
39 mins अघि
14 hours अघि
कार्टुनमा भेटिएको बच्चालाई एक्कासि के भयो?हस्पितलमै भेटिए बुवा,बुवा मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
घटनास्थलमा पुग्दा देखियो यस्तो भाबबिहिल दृश्य , प्रहरीको अनुसार लाश यस्तो अबस्थामा भेटिएको थियो, हेर्नुहोस घटनास्थल लगाएत छिमेकी संग गरिएको कुराकानी (भिडियोसहित)
कक्षा १२ को परीक्षाको मिति तोकियो
सुष्मिताकी नन्दाको यस्तो भिडियो बाहिरियो, प्लान बनाएर दाईको बदला भाउजुसँग ? बाहिरियो यस्तो रहस्य (हेर्नुहोस भिडियो)
सो च्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घ ट्यो खाना पकाउने ग्यासको भाउ : हेर्नुहोस